KENYA-(DAMMUL-JADIID IYO-NAIROBI+MR-XIDDIG)-WAA NIN-SIDEE AH??..Mr-XIDDIG WAA-ORIGINAL-JIG-JIGA-TO 115-CENTO-QUINDICI…(LAAJI=RUFUGEE-NEAR-BELED-WEYNE!..TOWN…Warbixin… | Allkisima.com
KENYA-(DAMMUL-JADIID IYO-NAIROBI+MR-XIDDIG)-WAA NIN-SIDEE AH??..Mr-XIDDIG WAA-ORIGINAL-JIG-JIGA-TO 115-CENTO-QUINDICI…(LAAJI=RUFUGEE-NEAR-BELED-WEYNE!..TOWN…Warbixin…
Waxaa Qoray Admin on May 16th, 2017 and filed under Wararka Somaliya. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
Allkisima-Phot's-(XOG)-Waxaa Uu Ka Mid Yahay Jaajuusiinta Ethiopia-1-JPG.
Muqdisho.🙁Allkisima)-Sida Lawada Ogsoonyahay Laga Soo Billaabo Sannadkii 1969kii Marlkii Kacaanka Max’ed Siyaad Dalka uu ka Curtay,waxaa jirtay in dalka uu faraha ka baxay laakiinse inta badan dadka aanay ogaan oo aanay fahmin.
Waxaan Shaki ku jirin illaa maanta in aan weli si fiican loo fahmin oo aan la kala garan dadka soomaalida ah,iyo dadka aan soomaalida aheyn.
Waa isu egnahay Af-soomaalina waa kuwada hadalnaa Af-soomaali maaha,waxaaana jirta dadka soomaaliyeed in ay ka cabanayeen General Gabre,laakiinse waxaan shaki ku jirin in ay jiraan shakhsiyaad kuu Eg isku dhaqanna aa tihiin isku diinna aad tihiin Haddana Afsoomaalina ku hadla,oo laakiin GENERAL GABRE KA DARAN,sida xiddig & Faarax Sakiin & Kii Xeer Ilaaliyaha U ahaa Xassan Sheekh.
Dhammaan raggan aan sheegnay waxa ay soomali uga Egyihiin seddexda Calaamadood ee halkaan aan ku xusnay,ha-Yeeshee Qalbiga & Maskaxda Soomaali Kama Aha,waxaana ay ka sii Xag-jiraan GENERAL GABREoo waxa ay buuxiyeen booskii gabre oo waxaa la yiri idinkaan la idinka shakineenina howshii gabre iyo mid ka sii daran wada Sida:-Qala-laasaha,isku-dirka -arbushaad,iyo siraha oo la-la boxo!1..IWM.
Haddaba waxaa is-weydiin mudan Mr-xiddig Yaa Garanaaya halka uu waxbarashada Dugsiga hoose & Sare uu ku dhammeystay…Jawaabtan Waxaa laga Rabaa Qofkii ay isku iskuul Ahaayeen Ama dugsi Quraan Ay Isla-dhigan jireen.
Waxaa La Ogyahay In Marxuum Siyaad BARRE uu Aad u Fudu-daaday isla-markaana Ethiopian ku hadla afka soomaaliga in dalkii soomaaliya la oran jirey furayaashiisii farta ka saaray,sidaas darteedna dowladdii somaaliya la Oran-jirey Lagu waayey,oo-Guud Ahaan Sirtii dalka Bannaanka Ubaxaday,waxaana dhammaan arrimahaas ku kallifay isagaa ka soo jeeday gobolka gumeysiga ETHIOPIA ee OGADENIA.
Waxaa xusid mudan in Marxuum Siyaad Raggii Ethiopianka ahaa ee uu ka keenay dhulka amxaarada ka Mid Ahaa -Ninkii Generaalka Uu Ka Dhigay ee La Oran-jirey Aden Kuukaay,waxaa kale oo ka mid ahaa labadii nin ee walaalaha ahaa ee Ilma Cumar Jees,waxaa-Kale oo ka mid ahaa,ninkii uu wasiirka ka dhigtay Dr:-Xuseen C/Qaadir Qaasim,oo markii dambe la ogaaday inuu sir bixiyey oo cara-ray,waxaa kale oo Ka Mid Ahaa General Jibriilkii uu N.Sugidd u- Dhiibtay,waxaa kale oo ka mid ahaa General Gabyoow oo isagana Kiinya ka Soo Cararay Markii dambena Xiriir Fiican La Lahaa Dowladdii Mr-Daniel Arap MOI.dagaalna ku qaaday siyaad Barre,marka dhammaan raggaas waxaa la Ogaaday markii dambe in ay jaajuus-U-Ahaayeen Ethiopia,waloow aan la xaqiijin in aden Gabyoow uu jaajuus ahaa.
Sidoo kale waxaa xusid mudan in somalia uu ilaaheey nin xoolo ah faraha u galiyey SOMALIA,oo aan siyaasi aheyn oo haddana Muqsumaasuq Badan,oo aanan kala garaneynin qofka soomaliga ah & kaan Soomaaliga Aheyn.waa Xassan sheekh alle ma soo ceshee.
Illaa iyo hadda waxaa la La Yaabbanyahay xildhibaannimada Xiddig oo xassan sheekh ayaa laaluush ka cunay sida aannu warar hoose ku helnay haddana la-lama yaabin oo waxa uu ka faaiideystay ayaa la leeyahay 4.5.iyo soomaalinimo BEEN AH.
Waxaan Shaki ku jirin Mr-XIDDIG haddii Uu Ku Dhalan lahaa Somalia,isla-markaana uusan jaajuus Ethiopia uusan aheyn inuusan noqdeen mucaarad,waayo nin dadkiisii & Dalkiisii Ay Gubteen maaha ninkii hadli lahaa,Maanta iyadoo Yiddidiilo Ay gashay Shacabkii Soomaaliyeed.
Dhammaan Arrimahan aan kor ku soo sheegnay waxaa markhaati u ah Safiirka cusub ee Ethiopia oo soomaali ah si uu wax walba u dhuuxo oo u ogaado sirta Somalia,Marka dowladda Farmaajo waa in ay codsataa in la beddelo safiirka Ethiopia,waxaana loogu talo-galay inuu saaxib la noqdo kheyre,maadaama Ay wadaagaan Qabiilka (Karanle Hawiye=Murursade).
Ugu dambeyntii dowladda Farmaajo Waxaa lagu Wargelinaa in aanay noqon mid hurudda,waxaana khasab ah in ay ogaato dowladda halka ay cagta dhigeyso,oo ay iska ilaaliysaa jaajuusiinta Ethiopia & kiinya,oo qabiil walba leh.